व्यायाम र प्रशिक्षण - Vondt.net
श्रेणीका लागि अभिलेख: अभ्यास र प्रशिक्षण
तनावका लागि। योग अभ्यास
16 / 08 / 2016 /0 टिप्पणीहरू/i गुणस्तर लेख, व्यायाम र व्यायाम/av भोंड्ट
तनावग्रस्त? यहाँ Y योग अभ्यासहरू छन् जसले तपाईंलाई आराम गर्न र मांसपेशिको तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। कुनै व्यक्तिसँग तनावको साथ साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
योग र योग व्यायामहरू उपयोगी हुन सक्दछ जब यो व्यस्त दैनिक जीवनमा आराम र आरामको लागि आउँदछ। तन्का मांसपेशीहरू र कडा जोड्नेलाई नियन्त्रण गर्न नियमित तन्काउने र आन्दोलन गर्ने राम्रो उपाय हुन सक्छ। यसको लागि प्रत्येक दिन २०-20० मिनेट छुट्याउने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसो भए तपाईं महान प्रगति देख्न सक्नुहुनेछ।
१. सुखसुना (ध्यान स्थिति)
यो योग आसन डायाफ्राम रिलिज गर्दछ र तपाईंलाई आफ्नो पेट संग सास फेर्न अनुमति दिन्छ। आराम र ध्यान तपाईंको पेट संग सास फेर्ने मा ध्यान दिनुहोस्। तपाईको नाकबाट लामो सास लिनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो मुखबाट बिस्तारै सास फेर्नुहोस्। -०-30० भन्दा बढी सास फेर्नुहोस्।
एक आरामदायी योग स्थिति जसले हिप र सीटमा गतिशीलता बढाउँदछ। यसले विस्तार गर्दछ र अधिक लचकता दिन्छ विशेष गरी तल्लो पछाडि। Find- seconds सेटहरूमा दोहोर्याउनु अघि स्थिति सजिलै तन्काउनुहोस् र seconds० सेकेन्डसम्म समात्नुहोस्।
एक योग स्थिति जहाँ तपाईं वास्तवमा तनाव र तनाव जारी गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तल्लो भागबाट सम्पूर्ण पछाडि फैलाउँछ गलामा संक्रमणसम्म सम्पूर्ण प्रकारका मांसपेशीहरू जुन हामी सबैलाई थाहा छ राम्रो तरिकाले फैलाउन गाह्रो हुन सक्छ। यसले तल्लो र माथिल्लो पछाडि तन्काउँछ र अधिक लचिलोपन प्रदान गर्दछ। तपाईको घुँडामा उभिनुहोस् र आफ्नो शरीरलाई तस्बिर हतियारको साथ अघि झर्नुहोस् चित्रमा देखाइएको छ - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यो नियन्त्रणित, शान्त गतिमा गर्नुहुन्छ। Find- seconds सेटहरूमा दोहोर्याउनु अघि स्थिति सजिलै तन्काउनुहोस् र seconds० सेकेन्डसम्म समात्नुहोस्।
4. «5-प्रविधि» (गहिरो सास लिने प्रविधि)
पहिलो आधारभूत गहिरो सास प्रविधिको मुख्य सिद्धान्त भनेको एक मिनेटमा times पटक सास फेर्नु र बाहिर जानु हो। यो प्राप्त गर्ने तरिका भनेको गहिरो सास लिनु र to सम्म गणना गर्नु, भारी सास फेर्नु अघि र फेरि count गणना गर्नु हो। यस प्राविधिक संस्थापकहरू लेख्छन् कि यसले उच्च गतिमा सेट गरिरहेको सम्बन्धमा मुटुको दरमा भिन्नतामा इष्टतम प्रभाव पार्दछ र यसैले तनाव प्रतिक्रियाहरूसँग लड्न अझ तयार छु। यो सास फेर्ने प्राविधिक योग स्थिति सुखुसानासँग मिल्दछ।
V. विपरिता करानी
6. अधो मुख सवानासन
प्रभावी व्यायाम जसले घाँटी र काँधमा तनाव जारी गर्दछ। सबै चौकामा उभिनुहोस् र त्यसपछि सिट बिस्तारै छतमा उठाउनुहोस् - जबसम्म तपाईं सचित्र स्थितिमा पुग्नुहुन्न। करीव -०-30० सेकेन्डको लागि स्थिति समात्नुहोस् (वा लामो रूपमा तपाईं सक्नुहुनेछ) र त्यसपछि बिस्तारै आफूलाई भूमिमा तल झार्नुहोस्। व्यायाम राम्रो तरीकाले काँध वरिपरि सही संरचना र मांसपेशीहरू सक्रिय गर्दछ। 60-4 सेट मा दोहोर्याउनुहोस्।
यी उत्तम योग अभ्यासहरू छन् जुन अधिकतम प्रभावको लागि दैनिक गर्नु पर्छ - तर हामीलाई थाहा छ कि व्यस्त हप्ताका दिनहरू सधैं यसलाई अनुमति दिँदैन, त्यसैले हामी सोच्छौं कि तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ प्रत्येक दिन यदि यसलाई गर्नु भयो भने पनि।
यो सबै तपाईं मा निर्भर गर्दछ। सुरुमा तपाइँको लागि के काम गर्छ पत्ता लगाउनुहोस् र बिस्तारै निर्माण गर्नुहोस् तर निश्चित रूपमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्। यो एक समय खपत तर धेरै इनामदायी प्रक्रिया हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई निदान छ भने, हामी तपाईंलाई तपाईंको क्लिनशियनलाई सोध्न सोध्छौं यदि यी अभ्यासहरू तपाईंको लागि लाभदायक हुन सक्दछन् - सम्भवतः आफैलाई सावधानीपूर्वक प्रयास गर्नुहोस्। हामी अन्यथा तपाईं यस कदम मा हुन र यदि सम्भव छ भने कुनै न कुनै इलाकामा पैदल यात्रा गर्न प्रोत्साहन दिनुहुन्छ।
हामी सबै एक निःशुल्क सेवा जहाँ ओला र Kari Nordmann को माध्यम बाट आफ्नो प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो नि: शुल्क जाँच सेवा Musculoskeletal स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा - पूर्ण अज्ञात यदि तिनीहरू चाहन्छन्। सयौंले पहिले नै मद्दत प्राप्त गरिसकेका छन् - त्यसोभए तपाईं के पर्खदै हुनुहुन्छ? हामीलाई आज कुनै बाध्यता बिना सम्पर्क गर्नुहोस्!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yoga-mot-stress.jpg?media=1648573622 650 1000 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2016-08-16 17:18:412022-03-18 17:27:36तनावका लागि। योग अभ्यास